Isimo Amabanga - Buka i-Rapport
Sichaza amawashi ethu ngokusemandleni ethu ukukusiza ukuthi ubheke isimo.
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi lezi zigaba zisebenza kuphela njengokulinganisa okunzima.
Sincoma ukuthi sihlolisise izithombe ezilayishwe ngumthengisi.
Kusha sha, ngaphandle kwezimpawu zokugqoka
Isimo se-Mint, ngaphandle kwezimpawu zokugqoka
Kusuka kunqolobane endala, kungaba nezimpawu zokugqoka ezivela kusitoreji
Kugugile ngaphandle kwezimpawu zokugqoka
Ingilazi, izandla, ukudayela, ikesi, nokunyakaza kusesimweni esihle kakhulu
Ukunyakaza kusizakala ngezinga elanele
Kungenzeka ukuthi kupholishiwe
Izimpawu ezikhanyayo zokugqoka noma ukuklwebheka
Ingilazi, izandla, ukudayela, ikesi nokunyakaza kusesimweni esihle
Awekho ama-denti amakhulu. Akukho ukuqhekeka kolayini wezinwele.
Kulungiswe kusetshenziswa izingxenye zangempela kuphela
Ukunyakaza okungenzeka kusekelwe
Izimpawu ezisobala zokugqokwa noma imihuzuko
Ingilazi kungenzeka ishintshwe
Ingaqukatha izingxenye ezingezona ezangempela
Ukunyakaza kungadinga ukunakekelwa
Izimpawu ezisindayo zokugqoka noma zokuklwebheka
Kungenzeka kungasebenzi ngokugcwele
Ikesi licijile kakhulu
Ukudayela, izandla kanye / noma ingilazi kudinga ukushintshwa
Izinto ezingekho, ezingasebenzi
Kufanele kuphela ukubuyisa izingxenye ezisele